Taxanaha dagaalka Verzuz rap wuxuu si toos ah uga socday Apple TV | Waxaan ka socdaa mac
Intii lagu gudajiray cudurka faafa ee coronavirus, inbadan waxay ahaayeen fanaaniinta isku dayay ka dhig xiritaanka balaayiin dad ah wax loo dulqaadan karo adduunka oo dhan oo sameeya dhammaan noocyada ficilada. Dalka Mareykanka, mid ka mid ah kuwa ugu caansan wuxuu ahaa taxane dagaallo rap ah oo laga sii daayay Instagram Live.
Taxanahan oo ay abuureen Swizz Beatz iyo Timbaland bishii Maarso 2020, waxay isku arkeen laba farshaxan tartan saaxiibtinimo halkaas oo mid waliba uu kan kale uga jawaabayo laxanka rap. Apple Music ayaa bilaabantay muujiyaan dagaalladan bishii Luulyo 2020 isla waqtigaasna waxaa laga sii daayey barta Instagram Live.
Verzuz wuxuu ahaa loo magacaabay Abaalmarinta Sawirka NAACP baahintiisa iyada oo loo marayo Apple Music, sidaas waxay ahayd waqti yar kahor intaan Apple isku dayin inay hesho xuquuqda baahinta gaarka ah.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Bloomberg, isagu ma uusan awoodin inuu gacanta ku dhigo iyo in ay ahayd shabakadda Fiidiyowga ee Fiinta leh ee lacagta ugu badan miiska saartay. Sida muuqata, xiisaha Apple ma soo marin dagaal sicir sida ay u dhacday marar kale.
Alicia Keys, Erykah Badu, John Legend, DJ Nice, Snoop Dog, DMX, Brandy, Patti Labelle, Gladys Knight, Ludaris iyo Nelly ayaa ka mid ah fannaaniinta ka qaybqaatay dagaalladan kufsiga ah.
Sida muuqata, Apple ujeedkeedu wuxuu ahaa inuu ku siiyo fiidiyowyadan nooc ka mid ah Taxanaha xilliyeed iyada oo loo marayo Apple TV + halkii Apple Music ay ka sii wadi laheyd balaarinta waxyaabaha laga heli karo barnaamijkeeda fiidiyoowga ah ee laxiriira muusikada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Taxanaha dagaalka Rap Ver Verz wuxuu kujiray isha Apple TV